Wednesday July 08, 2020 - 11:02:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Cudurka Carona Virus ayaa asiibay mas'uulka ugu sarreeya dowladda Baraaziil oo ah midda ugu weyn uguna dhaqaalaha badan qaaradda Laatiin Ameerika.
Jair Bolsonaro oo ah madaxweynaha Baraaziil ayaa ku dhawaaqay in uu caqabo xanuunka Cavid19 kadib markii baaritaanno lagu sameeyay.
Isagoo hadal ka jeedinayay telefeshino maxalli ah ayuu sheegay in uu xanuun dareemay kadibna baaritaan lagu sameeyay sidaasna lagu ogaaday in uu haayo xanuunka Carona Virus.
65 sana jirkan oo horay ugu jees jeesay jiritaanka cudurka carona ayaa carabaabay in heer kulka jirkiisa uu gaaray 38 darajo islamarkaana uu dareemayo astaamaha cudurka dilaaga ah ee Carona balse wuxuu niyadda ugu dajiyay taageerayaashiisa in xaaladdiisu aysan darnayn.
Bolsonaro ayaa bishii Maarso ee lasoo dhaafay kasoo muuqday warbaahinta isagoo ku jeesjeesaya Carona kuna sheegaya Fayrus daciif ah oo ka liita Hargabka balse labadii bilood ee udambeeyay ayuu Carona dalka Baraaziil kudilay dad gaaraya 67 kun oo ruux isagoona wadankan ka dhigay dalka labaad ee ugu dhimashada iyo bukaanada badan caalamka.
"heer kulka jirkeyga wuxuu gaaray 38 darajo balse labadeyda sambabood wa nadiif" sidaas waxaa yiri madaxweynaha Baraaziil oo la xanuunsanaya Carona virus.
tan iyo bilaawgii caabuqa safmareenka Carona ayuu madaxweynaha Baraaziil ee hadda xanuunsanaya inkirsanaa jiritaanka Carona wuxuuna diidi jiray in uu xirto maaskada sanka iyo afka looga daboosho fayruska, isagoo bilaa maasko ah ayuu shirar laqaadan jiray golihiisa wasiirrada